Armenia: Blaogin’ny fanabeazana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Jolay 2008 19:04 GMT
Tsy ihambahambàna fa miha-matotra ny fitoràhana blaogy any Armenia nandritra ny sehatra iray manokana tena anjakan’ny resaka kolikoly amin’ireo faritry ny firaisana sovietika teo aloha..
Araka ny blaogim-panabeazana Transitions Online, Chalkboard (solaitrabe), tsy tranga maningana irery akory i Armenia raha ny fitarazohan’ny fanovany.
Raha midehaka ho mametraka drafi-panabeazana maoderina sy afaka mifampitaha ny governemanta ao Armenia, mifanaraka amin’ny tondro-zotra tany Bologne, dia betsaka amin’ireo Armeniana no mihevitra fa ity tetezamita ity dia tsy mitondra afa-tsy fahamafisan’ny olana efa sedraina amin’izao fotoana. Na eo aza ny drafitra mampilendalenda aroson’ny Ministeran’ny Fanabeazana, ireo sekoly Armeniana dia manohy hatrany ny adiny amin’ny tsy fahampian’ny fitaovana sy ny mpampianatra matihanina, indrindra fa any amin’ny faritra ambanivohitra, noho ny hakelin’ny teti-bolam-panjakana ho an’ny fanabeazana, 3,2 % monja amin’ny harin-karena faobe (PIB), araka ny tarehi-mariky ny Banky Iraisam-pirenena farany.
Manjary ivon-dresak’ireo blaogy samihafa miresaka manokana an’i Armenia sy ny faritra atsimon’ny Caucase ny fanabeazana. Ohatra ny The Armenian Economist, mitsikera ireo drafitry ny governemanta handrotsaka vatsim-pianarana ho an’ny mpianatra mba hahafahan’izy ireny mianatra any ivelany. Ity blaogy ity dia mihevitra fa tsara kokoa raha ampiasaina amin’ny fanatsarana ny rafi-pampianarana ao an-toerana izany vola izany.
Tsy ela akory izay dia nilaza ny Praiminisitra fa ny governemanta dia hamatsy ny fianarana any ivelany ho an’ny mpianatra vitsivitsy. Tsy asiana adihevitra fa fanamafisana ny filàn’ny firenen-tsika hanangana foto-drafitrasa sahàza ho fandraisana ireo mpianatra izany ary fanehoana ny fanatsaràna zàra raha misy eo amin’ny tontolon’ny anjerimanontolony.
Ny mifanohitra amin’izay, ireo fahafahà-manao kely ananantsika dia tokony ampiasaina hisarihana mpampianatra ho aty amin’ny firenentsika. Azo atao tsara amin’izay ny mamolavola mpianatra maro ao. Ary, mbola mavesa-danja kokoa, mety mba hivoatra ireo anjerimanontolo efa misy, ka mety mba hanolotra fanofanana mendrika kokoa.
Raha fintinina, dia ireo toeram-mpampianarana anjerimanontolo-ntsika no mila hamafisina. Raha tsy izany, ny fanavaozana ny fahafahantsika mandray (capacité d'accueil) dia hitohy hiadam-pamindra foana.
Armenia Higher Education & Sciences, blaogin’i Aryana Petrova izay mpampianatra eny amin’ny ambaratonga ambony ary consultante dia mitsikera koa ny politikan’ny governemanta armeniana momba ny anjerimanontolo. Rehefa nanontany tena izy raha tena afaka mametraka ireo fanavaozana izay “tsy ampy hatrizay ela izay” tokoa ao amin’ity “sampan-draharaham-panjakana isan’izay tsy alehany ity”, ny Minisitra vaovao misahana ny Fanabeazana sy ny Siansa, dia notsiniany ireo fepetra tsizarizary tsy maintsy iasan’ireo mpikaroka.
Matetika no ambara amintsika fa raha manana otrikarena voajanahary sesehena ny mpifanolo-bodirindrina amin’i Armenia, manan-jàra kosa i Armenia amin’ny fanànany ny olony. […]
Ny olan’ny fahaiza-manao ara-tsaina (capital intellectuel) dia noho izy, tsy toy ireo loharano hafa, fa mora mifindra toerana ary raha tsy arovana, amporisihana ary karakaraina, dia mora mihitsy ny manondrana azy. Maro ireo firenena mihàza talenta vao avy any ivelany mba hampivoarany ny teo-kareny manokana, izay miteraka fatiantoka ho an’ireo firenena nilaozan’ireny talenta ireny amin’ilay antsoina hoe “fandosiran’ny atidoha”.
Ao anatin’ity tranga faharoa ity no misy an’i Armenia : iharan’ny fifindran-toeran’ny atidoha izy amin’izao fotoana izao. […]
Marina fa nihena kely ny fifindran-toerana nandritra ireo taona farany vitsivitsy, saingy tsy foana kosa akory. Ny fahafaha-mikaroka sy mamorona ananan’ny firenena dia mitontongana isak’izay taona mifandinby, ary mbola hitohy mandritry ny fotoana ela io toe-javatra io raha tsy misy fepetra fanavaozana goavana raisina ho an’ny fanabeazana sy ny fikarohana.
Liana amin’ny toeran’ i Armenia eo anivon’ny TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) ny blaogy Social Science in the Caucasus, fanomezana laharana eran-tany ho an’ny dingan’ny mpianatra (hakingan-tsaina) (izay mifandraika amin’ny CM1 sy 4e ho an’ny frantsay). Manontany tena izy raha tena maneho tokoa ny tena zava-misy ny vokatra navoaka ary mangataka fikarohana bebe kokoa momba io resaka io, no sady maniry ny hevitry ny mpamaky azy ihany koa.
Voka-pikarohana hafa natao tao Armenia no toa milaza fa tsy dia tena azo lazaina ho mahasolo-tena ny maro loatra ny fantina nataon’ny TIMSS. Raha tena azontsika tsara izay lalan-kevitr’izy ireo, ireo mpanoratra ity fikarohana ity dia manontany raha avy amin’ny ambaratonga antonontonony na avy amin’ny ambaratonga ambony ireo mpianatra Armeniana nofantenan’ny TIMSS . Izay mety ho azo adika fa tsy dia hita loatra tao ireo mahantra. Mety ho lohahevi-pikarohana iray tsara trandrahana koa izay (tsy misy mpikaroka tena havanana ve, eto ?).
Ndeha hatao hoe ny lohahevitra toy ny fanabeazana dia mitohy foana ny fandrakofana azy, tena azo asandratra ho isan’ny fitaovan-tserasera mendrika tokoa hiresahana ny olana manolo-koditra ireo blaogy tahaka itony. Azo raisina ho fitaovana tsara mba hitondràna ny mangarahàra amin’ny ady mafin’ny fanavaozana ny rafi-pampianarana anjakàn’ny kolikoly sy ny tsy fahombiazana koa itony, ho an’ireo firenena toa an’i Armenia.
Ohatra, tamin’ny 2006, ireo mpianatra vahiny tao amin’ny Anjeriomanontolom-panjakana Fianarana Mitsabo ao Erevan [Yerevan State Medical University (YSMU)] dia namorona ny blaoginy azy manokana taorian’ny fihetsiketsehana naterakin’ny fahafatesana tsy mazava nanjo ny mpianatra indiana iray. Na dia nofafàna aza izy io taty aoriana, dia fiandohan’ny blaogy ho fanomezan-danja ny mpianatra sy ho fanerena ny hisian’ny mangarahara bebe kokoa eo amin’ny tontolom-pampianarana.
Soratra miverina: Armenia & the South Caucasus | The Caucasian Knot » Blog Archive » Blogging in Armenia
22 Jolay 2008, 07:04